May | 2011 | Somaliland Hargeisa City
waxa shalay Isniin ku geeriyootay magaalada Hargeysa Alla ha u naxariistee Shugri Axmed Xaashi oo in mudo ah la il darnayd xanuun ka haleelay dhinaca cunaha oo aad u bararay.
31 May, 2011 — somaliland1991
Somaliland1991: Wuxuu tacsi u direysaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday marxuumadu: Shukri Ahmed Xaashi.
Ka soo xigtay: SDWO
SDWO (Hargeisa 31/05/2011) Alla ha u naxariistee waxa shalay Isniin ku geeriyootay magaalada Hargeysa Alla ha u naxariistee Shugri Axmed Xaashi oo in mudo ah la il darnayd xanuun ka haleelay dhinaca cunaha oo aad u bararay. Marxuumada Shugri waxa ku dhacay xanuun la garanwaayey, iyadoo ay ka mid ahayd dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa. SDWO ayaa had iyo jeer soo bandhigijiray sawiradeeda iyo kolba deeqaha ka soo gaadha jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan dunida dacaladiisa oo ay u suurto gashay in aakhrikii loo qaado magaalada Kenya si bal xaaladeeda caafimaad wax looga qabto, hase yeeshee dhakhtiirtii kiiniyina waxba way u qaban kariwaayeen, iyagoo sheegay inuu hayo xanuunka aan ilaa hada dawadiisa la helin ee Kansarka, (subxanalah) iyadoo sidaasi loogu soo celiyay magalaada Hargeysa.
Bishii May ee 2010kii ayay ahayd markii Kiinya loo qaaday iyadoo ay gacan ka geysteen qaadideeda (Somali American Health Care Foundatiion) Ururka daryeelka caafimaadka Somalida America iyo culimadii xaafada ay daganeyd shugri ee Daami – Hargeisa.
All ha u naxariistee Shugri waxa xalay lagu aasay magaalada Hargeysa. Bahda SDWO waxay marxuumada ilaahay uga baryayaan inuu naxariistii jano geeyo, ubadkii, ehelkii, qaraabadii iyo asaxaabtii ay ka baxdayna samir iyo iimaan ka siiyo aamiin.
Inaalilaahi wa inaa ilayhu raajacuun.
SDWO News Desk Hargeisa
Wararkii hore ee marxuumad Shugri
SDWO (Kenya 04/05/2010) Mudo gaaban kadib markii shugri lagu faafiyey qaar kamid ah saxaafada somaliyeed guud ahaan gaar ahaan webka Sdwo ayaa waxaa lagu guuleystey in loo qaado dalka Kenya caasimadiisa Nairobi halkaas oo qalniin ku tacaluuqa xanuunkeeda loogu sameynayey.
Qaaditaanka gabadhan ayaa waxaa iska lahaa Ururka la idhaahdo
(Somali American Health Care Foundatiion) Ururka daryeelka caafimaadka Somalida America iyo culimadii xaafada ay daganeyd shugri Daami hargeisa.
Haddaba markii laguda galey baadhitaanka xanuunka kaga dhacay qoorta gabadhan somaliyeed ee shugri ayaa waxaa la xaqiijiyey iney leedahay xanuunka Kanserka ee aan dawadiisa wali dhakhaatiirta caalamku xal buuxa u helin adag taheyna in la qalo.
Jawaabta baadhitaanka dhakhaatiirta ayaa waxaa ay noqotey mid naxdin iyo argagax badan kaga tagtey shugri . xaalada shugri ayaan hadda aheyn mid sideedii hore ah.
Sidaana waxaa sheegay gudoomiyaha gudida hawsha shugri wadey Mudane: Max,ed Mouse Nour(Abu_Sufyaan) oo khadka telfoonka kula xidhiidhey ururka Somcare iyo dhakhaatiirtii gabadhan baadheysay.
Sidoo kale waxaa uu Abu sufyaan noo xaqiijiyey iney weegan soo socda iman doonto magaalada hargeisa Shugri iyadoo ka soo anbabaxeysa magaalada nairobi.
Jawaabta baadhitaanka caafimaad ee shugri ayaa waxa ay noqotey sidoo kale mid anfariir iyo naxdin dheeraad ah ku beertey cidii aqoon u laheyd gabadhan.
Haddaba waxaa marag madoon ah inuu Alle sw wax ku tusaayo Adoomihiisa waayo caafimaad taam ah waa siin karaa laakiin cida loo jeedo ayaa ah inaga si aynu wax uugu qaadano.
Waxaanu Alle sw ka baryeynaa inuu caafimaadkeedii u soo celiyo danbigaanana wada dhaafo Aaaaamiin.
Dhinaca kale cidii jecel iney gabadhan xaaladeeda macluumaad dheeraad ah ka hesho hala xidhiidho Gudida hawsheeda wadey oo joogta magaalada hargeisa.
Tellfoonada: 002522+ 4482999/4421178
Soo diyaarintii barkhad jama hirsi
Shugri oo kenya loo qaadey iyo deeq lacag ah oo la gaadhsiiyey!
SDWO (Hargeisa 0304/2010) waxaa jimcihii markay saacadu ku beegneyd cabaaro tobankii subaxnimo laga anbabixiyey gagada diyaaradaha ee magaalada berbera Shugri axmed xaashi oo xanuun kaga dhacay dhinaca qoorta islamarkaana lagu soo bandhigey webka sdwo.
haddaba shugri ayaa waxaa loo qaadey magaalada nairobi ee dalka kenya xalkaas oo loogu sameyndoono qalniin la xidhiidha xanuunkeeda hawshan ayaa waxaa soo abaabuley ururka la idhaahdo (Somali American Health Care Foundation) oo micnaheedu yahay ururka daryeelka iyo caafimaadka ee somaida.
lama garan karo wakhtiga uu qaadan karo qalniinka gabadhani laakiin waxaa lagu wadaa in haddii alle idhaahdo si fudud ku dhamaado.
dhinaca kale ka hor bixitaanka shugri ayaa waxaa la gaadhsiiyey deeq lacageed oo uuga timid cariga ingriiska taas oo cadadkeedu ka koobnaa 1850$ dollar waxaana ku wareejiyey gudidii hawsheeda wadey.
Shugir oo haysa tigidhkii ay ku raacaysay diyaarada
ugu danbeyntii cidi jecel iney macluumaad dheeraad ah ka helaan gabadhan waxaa ay kala soo xidhiidhi karaan:
mahadnaq gaar ah :
anigoo ah barkhad jama hirsi waxaan si sharaf iyo karaamo ku dheehan tahay uugu mahad celinayaa Websitka sdwo iyo ururka gabadhan qaadey iyo sidoo kale dhamaan wallaalaha somaliyeed ee gargaarka bini aadamnimada ah u fidiyey waxaanan Alle ka baryayaa inuu dhamaanteenba ajarkeeda ina wada siiyo Aaaaaaaaaaaaaamin.
gabadhan xaaladeeda iyo sida ay ku danbeyso waxaad kala soconkartaa webka sdwo insha Alaah.
SDWO News Desk – Hargeisa
$1600 oo Deeq lacageed ah oo markale la gaadhsiiyeey gabadhii cunuha xanuunku kaga dhacay!
SDWO (Hargeisa 27/03/2010) Daraasado caalami ah oo lagu sameeyey bulshada somalida ayaa waxaa ay xaqiijiyeen ama ay daah fureen iney somalidu yihiin bulsho aad u naxariis badan isla markaana isku gargaarka iyo kaalmeynta dadkooda liita ku fiican.
Haddaba ka sokow kala danbeynta haykalka dawladeed ee ka hanaqaadey somaliland iyo nabad qiimaha badan ee shacabka somaliland haystaan ayaa waxaa marag madoon ah iney wali jiraan dulduleelo xaga adeega ilaha bulshada sida Caafimaadka. Daryeelka dadka tabaaleysan. iwm
Waxaana taas dhabarka u rita inta badan qurba joogta somaliland meelkasta oo ay daafaha dunida ka joogaan,
Waxaa laga joogaa mudo gaaban markii websitka Sdwo u bandhigey akhristayaashiisa sharafta badan gabadh magaceeda la idhaahdo
Shugri Axmed Xaashi isla markaana kamid ah danyarta xaafada daami ee magaalada hargeisa Shugri ayaa waxaa ku habsadey xanuun kaga dhacay qoorta iyo cunaha sidaad sawiradan ku aragtaan.
Shugri oo deeqo lacageed horey u gaadheen ayaa waxaa la gaadhsiiyey lacag kale oo cadadkeedu dhan yahay 1600$ dollar taas oo ka soo gaadhey qurba joogta ku kala nool daafaha dunida sida Wallaalaha Norway, Egland. Sucuudiga. Mareykanka.
Haddaba shugri oo lacagtu gaadhey isla markaana ay u gudbiyeen gudida hawshan wada gudoomiyahooda Sheikh: Abu Sufyaan ayaa iyadoo dareenka cabireysa waxa ay tidhi waxaan marka hore aad iyo aad uugu mahadinayaa Alle Sw marka xigtana waxaan u duceynayaa dhamaan dadka wallaalaheyga ah ee i soo caawiyey waxaanan leeyahay Alle naxariistiisa iyo janadiisa ha idin siiyo.
Xanuunka oo ku sii badanaya gabadhan ayaa waxaa lagu wadaa In loo qaado dalka kenya insha Allaah.
Ugu danbeyntii waxaan ka codsaneynaa dhamaan cidii jecel iney wax ku sadaqeystaan gabadhan dhiban iney kala xidhiidhi karaan
Telfonka ah 002522+4482999 ama
Markale oo deeq lacageed oo dhan $540 doolar la soo gaadhsiiyey gabadhan dhibaataysan
Waxaa laga joogaa mudo gaaban markii ay websiteka Sdwo u bandhigey akhristayaashiisa sharafta leh gabadh somaliyeed oo dhibaato xanuun kaga habsadey qoorta ama cunaha sidaad sawiradan ku aragtaaan.
Gabadhan ayaa magaceedu yahay shugri axmed xaashi waxaaney degan tahay magaalada hargeisa gaar ahaan xaafada daami.
Shugri axmed xaashi waa gabadh ka soo jeeda qoys sabool ah isla markaana ay dhinteen labadeedi waalid waxaa sidoo kale ay tahay kaligeed iyadoon ifka aaney u joogin cid u wallaalo ah marka laga reebo dadka islaamka ah ee ay ku wallaaloobeen diinteena islaamka ah mooye
Shugri waxaa ay wax caruur ah leedahay gabadh kaliya ninkeedina waa uu geeriyoodey.
Guriga ay gasho shugri waxaa uu ka sameysan yahay maryo iyo qoryo kaas oo loo yaqaan Buul
Haddaba shugri ayaa waxaa la soo gaadhsiiyey lacag dhan 540$ Dollar taas oo uugu timid dalka mareykanka gaar ahaan jaaliyada Gobolka Minisota.
Deeqdan lacagta ah ayaa waxaa lagu hagaajiey xafiiska Gudoomiyaha gudiga hawsha gargaarka ah ee shugri wada Sheikh: Max,ed Mouse Nour Abu Sufyaan waxaana gacanta laga galiyey shugri oo ah dhibanaha lagu soo caawiyey lacagtan.
waxaa haddaba lagu wadaa in dhakhtar dalka dibadiisa ah loo qaadato insha Allaah gaar ahaan dalka Kenya mudooyinka soo socda sida uu noo xaqiiyey Sheikh: Abu Sufyaan.
hawshan ayaa waxaa wada Ururka la idhaahdo Somcare Org. oo saldhigiisu yahay dalka mareykanka.
haddaba waxaanu akhristayaasha iyo cidii kale ee jecel iney waxtaraan gabadhan xanuusaneysa kala xidhiidhi karaan Telfoonadan hoos ku qoran:
Shugri Axmed Xaashi waa gabadh aad uula dhiban xanuun kaga habsadey dhinaca cunaha iyo qoorta shugri waxa ay kamid tahay danyarta degan magaalada hargeisa gaar ahaan xaafada daami isla markaana shugri waxa ay ka soo jeedaa qoys aan awoodooda dhaqaale u saamaxeynin iney geeyaan cusbitaal dibada ah iyadoo dhakhaatiirta dalku u sheegeen inaan waxba lagaga qaban kareyn dalka gudihiisa dibada mooye.
Haddaba shugri waxaa xanuunkeedan u dheer takoor ay kala kulantey dadkii ay dariska ahaayeen iyadoo caruurtu marka ay u booqato lagaga qeylinayo oo laleeyahay ha u tagina ee ka joogaa iyo erayo kale oo dhib kaga tagey qalbigeeda.
Shugri ayaa waxaan ku booqdey gurigeeda waxaanan weydiiyey su.aalo waxaana isla markiiba indhaheeda soo hadheeyey ilmo kadibna dareynkeyga ayaaba is badelay oo waan ilmey gaadhey shugri waxa ay awoodi kari weydey iney ka jawaabto su.aalaheyga.
Si kastaba ha ahaate waxaan isku dayey mar kale inaan dajiyo dareenka gabadhan waxaanan ku qanciyey iney samirto oo arintani tahay imtaxaan iyo callaamad Alle shugri waa ay ku degtay waanadeydaa.
Haddaba akhriste wallaal adigoo mahadsan fadlan soo gargaar gabadhan.
Wixii caawimaha ku soo hagaaji SDWO Relief Project oo halkan aan idiinku soo bandhigidoono sawirada markaan deeqaha gudoonsinayno sidii aad uga barateen dhamaan deeqahii hore ee aan halkan sawirada idiinku soo bandhignay. Please hor ilaahay uga qaybqaado oo gargaar si muslnimo ah ugu fidi gabadhan dhiban. Email noo soo dir si aanu idiin siino habkii aad uga qaybqaadan lahayd: Samafal@sdwo.com iyo sdwouk@yahoo.com
Wixii faahfaahin ee intaas dheer Waxaanad kala soo xidhiidhi kartaa
Sheikh: Max,ed Mouse Nour(Abu_Sufyaan)
Oo ah gudoomiyaha hawshan wada
Tell: 0025224482999 /4421178
Coca-Cola Invests $10 Million to Set Up New Bottling Plant in Somaliland
Inlägget skrevs 05/03/2011 19:46 Tävling
By Sarah McGregor – May 31, 2011 12:38 PM GMT+0200 Tue May 31 10:38:52 GMT 2011
Coca-Cola Co. (KO), the world’s largest soft-drink maker, plans to set-up a bottling plant in the breakaway republic of Somaliland, saying its stability and economic growth provide “conducive” conditions for investment.
Somaliland Beverage Industries, owned by local businessman Ahmed Osman Guelleh, was awarded a license to operate the factory that’s under construction and expected to start operating by the end of September, Ndema Rukandema, Coca-Cola’s franchise general manager for the Horn, Islands and Middle Africa, said yesterday. Coca-Cola has so far invested $10 million to build the facility in Hargeisa, the capital.
Somaliland declared independence from Somalia two decades ago, after the fall of dictator Mohammed Siad Barre. While no country officially recognizes Somaliland’s sovereignty, it has remained largely free of the clan warfare, kidnappings and assassinations that plague Somalia, to the southeast.
Coca-Cola enters an economy that the government says is almost entirely reliant on remittances sent home from citizens living abroad and the proceeds of camel, cattle, sheep and goat exports to the Middle East and North Africa. Output from the plant is meant to substitute sales from Coca-Cola beverages currently imported from the Middle East, Rukandema said.
“Somaliland is a growing economy, made buoyant by the level of trading activity in the country,” Rukandema said in an e- mailed response to questions. “The stability that the country has enjoyed over the last several years is a positive indication of a conducive business environment.”
Coca-Cola’s agreement with United Bottling Co., its partner in Somalia’s capital of Mogadishu where Africa Union troops and government forces are trying to drive out Islamic rebels, is “not in effect,” and production has been halted, he said.
Somalia’s government has been battling Islamist insurgents, including al-Shabaab, since 2007. The rebels control most of southern and central Somalia. The U.S. accuses al-Shabaab of having links to al-Qaeda, which has said it aims to establish a caliphate, or Islamic government, in the Horn of Africa country.
Milicsiga Dib u Eegista Maalmihii Lagu Dhowaaqay Somaliland Iyo Dareenkii Dadka Bishii May 1991.
30 May, 2011 — somaliland1991
Waxa ay ahayd xaalad colaadeed. Marka colaadi jirto, waxa cidhiidhi gala wax kasta oo nooluhu u baahanyahay. Inkastoo muddo dheer lagu soo jiray colaad
Waxa ay ahayd xaalad colaadeed. Marka colaadi jirto, waxa cidhiidhi gala wax kasta oo nooluhu u baahanyahay. Inkastoo muddo dheer lagu soo jiray colaad, maalmahaas waxa dhacay isbeddelo waaweyn. Bishii Jeeniweri ee 1991 dhammaadkeedii buu ka baxay Maxamed Siyaad Barre magaaladii Muqdisho ee xarunta u ahayd, muddada dheer ee labaatanka sannadood wax dheeraayeen. Dhinaca kale SNM iyo taageerayaashoodii baa maalmahaa qabsaday magaalada Berbera oo ahayd goob muhiim ah. Burburkii iyo is kaba raacintii xukunkii kelitaliska ahaa baa ku beegmay bilawgii 1991kii. Dareenkii, dadka ayaa aad u kacay, maxaa soo socda? maxaa la yeelayaa. Dad badan baa maalmahaa uu ku dhacay jahawareer siyaasadeed. Dadka qaar, waxa ay dareensanaayeen in uu jiro guux aad u xooggan oo ah in Somaliland -dii luntay dib loo soo celiyo. Waxaase dareen xooggani kala dhex galay taageerayaashii SNM iyo hoggaankii SNM. Markiiba waxa soo baxday in siyaasiyiinta waaweyn ee magaca ku lahaa SNM aanay doonayn in gooni la isu taago, balse shacbiga oo ay horkacayaan qayb kale oo SNM ta ka mid ahayd, baa si xooggan u waday dedaal ah in shirka Burco aanuu dhammaan iyadoon lagu dhowaaqin Somaliland.
Gebidhaclaynta maalmahaas, waxa xusid mudan sidii ay u xoojiyeen beelaha Boorame, in gooni la isu taago, taasoo ay xataa Burco u soo direen koox fannaaniin ahayd oo aan ka xasuusto majaajilaeystihii caanka ahaa ee ku magaca dheeraa “Sarreeye”. Riwaayaddaasi waxa ay ku saabsanayd dagaalkii sokeeye ee Jamhuuriyaddii soomaaliyeed ku baahay. Waxa aan ka xasuustaa Rawaayaddaas, oo koonfurina madaxa iskula jirto Waqooyina madaxa iskula jirto, oo qaybtii waqooyi, inta ay isa sii daayeen, gacmaha is-qabsanayeen oo heshiinayaan. Kooxdaasi waxa ay ka timi Boorame, oo farriintii ay gudbinayeenna ahayd—dhammaan reer Waqooyi ha heshiiyo.
Halkaa marka aan marayo, bal aan dib u yara noqdo, oo dib u jalleeco shirarkii ka horreeyey, shirkii Burco. Sidaan horeba u tibaaxay, dadka oo dhan dhegtaa taagnayd oo waxa la eegayey is beddelada siyaasadeed ee dhici kara. Xamar markiiba waxa lagu dhowaaqay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed iyo Ra iisal wasaare Cumar Carte Qaalib. Inkastoo magacaabista dawladdaa lagaga dhowaaqay Xamar, ay dad badani islahaayeen—malaa waa loo baahanyahay in la helo maamul ku meelgaadh ah oo buuxiya dawladnimadii burburtay. Dhanka kalese, waxa jiray dareen ka biya-diidey dhowaaqa Xamar ka soo yeedhay. Waxa muuqatay in aanay siyaasiyiintii USC wada socon oo Khilaaf weyni ka dhexjiray. Dhinaca Somaliland, waxa ka bilaabmay shirar ay beeluhu galeen oo wadatashi ahaa. Shirarkaas waxa aan ka xasuustaa, kii ka dhacay Hargeysa, Berbera, Boorame iyo kii ugu weynaa oo ka dhacay Burco. Waxa xusid mudan ergadii nabaddoonka ahayd ee ka yimi Boorame, in laga dilay nin ka mid ahaa ergadaas. Ilaahay ha u naxariistee, ninkaas oo aanan imminka magaciisa hayn waxa uu ahaa nin u godgalay nabaddoonimo. Waxa uu mudanyahay in taariikhda lagu xuso.
Ergooyinkii isugu yimi Berbera, waxa habboon in laga reebo xasuus-qor, laga samayn karo buug. Shirarkaa koobkoobnaa ka dib baa la guda galay shirkii Burco. Shirkaas wax ka soo bixi doona lama garanayn. Waxaase loo badnaa in lagu dhowaaqi doono Somaliland. Maadaama oo aanay ku qornayn dastuurkii SNM in Somaliland goonni ugu soo noqoto xuduudihii lixdankii, go´aanka shirkaasi waxa uu ahaa gacan uur ku jirta. Waxa kale oo dareen ku sii ballaadhay markii la ogaaday in siyaasiyiintii SNM ugu tunka weynaa aanay raacsanayn goonni isu taagga. Nasiib wanaag go´aankii maalintaa la qaatay waxa uu ahaa mid lagu kala badbaaday, oo dagaallo la mid ah kuwa ilaa maanta ka socda Soomaaliya ayaa dhici lahaa. Waxa faraha ka bixi lahayd talada wadaagga ah.
Maalintii lagu dhowaaqay Somaliland, ee taariikhdu ahayd 18/05/1991, waxa aan ka soo baqoolay magalada Rabaso ee ku taal dhinaca Itoobiya. Waxa aanu wadannay gaadhi toyota ah—nooca loo yaqaan Xaajiyadda. Goor fiid ah baanu soo galnay magaalada Kaam-Abokor. Waxa aanu ka soo galnay dhanka bari. Dhankii ay degenaayeen qaxootigii ka soo qaxay dagaaladii bilaabmay 1988kii, baanu beegsannay. Weli annagoon gaadhin xeradii qaxootiga ayaanu aragnay rasaas aan tiro lahayn oo kor loo ridayo. Yaab iyo amankaag! waar maxaa dhacay? Kuye! waa lagu dhowaaqay Somaliland. Farxaddaas iyo raynrayntaasi waxa ay muujinaysay sida loo jeclaa in lagu dhowaaqo Somaliland. Qofba si ha u arko, qofba si ha u jeclaado, mid kale ha u arko go´aan qaldan. Waxa ay ahayd xaalad u baahnayd go´aan qaadasho degdeg ah. Haddii kale jahawareer xooggan baa dhici lahaa. Jiho siyaasadeed oo la wada ilaashanayo na ma ay jirteen.
Socdaalkayagii waxa aanu ku tagnay, Kaam Haashim, Harta-Sheekha—socdaalkaas oo ahaa mid annaga noo gaar ahaa. Dib ayaanu u soo noqonay oo u soo kicitinnay Burco. Waxa aanu Burco soo gaadhnay badhtamihii bishii Mey/1991. Maalmahaas oo Mingistuna (madaxweynihii Itoobiya) laga tuuray xukunkii, ayaanu soo galnay magaalada Burco oo roob ka da´ay, oo barwaaqaysan. Magaalada markaanu soo galnay ba waxa aanu aragnay dad badan oo ka tallaabaya biriijka. Dadkaas oo ahaa ahaa rag sooc ah, waxa ay ku sii socdeen ama ka soo socdeen goobtii shirka. Maalintii danbeba waxa aanu tagnay goobtii shirku ka socday. Goobtu waxa ay ahaan jirtay ma garanayo, laakiin waxa ay ahayd goob burbursan oo aan daaqado lahayn–balse itaalka waxa ay ugu roonayd meel shir lagu qabto, marka la eego magaalada inteeda kale oo burbursanayd. Waxa ay goobtu ku taallay, haddii aanaan qaldanayn dhinaca xaafadda loo yaqaanay shacabka, xafiisyadii dhirta iyo daaqa ayaa malaa aan ka durugsanayn. Goob qurux badan bay ahayd, roobkii da´ay baa neecaw udgoon kaga tegey.
Waxa aanu istaagnay daaqad ka mid ah daaqadihii hoolka lagu shirayey. Waxa aan maalintaa xasuustaa waxa hadlayey Saleebaan Maxamuud Adan (Guddoomiyaha Guurtida ee maanta) iyo rag kale oo aanaan magacyadooda garanayn. Waxa socotay dood lagu lafo gurayey jamhuuriyadda cusub ee Somaliland. Magaalada Burco, maalmahaas waxa ay ahayd magaalo nabdoon, marka loo eego Berbera iyo Hargeysa oo xilliyadaa isku dhac badan iyo goolaaftan badani ka jiray. Nasiib wanaag Shirka Burco ka socday waxa uu ka dhacay Burco oo nabdoon oo aan baqasho jirin. Wufuuddii shirkaa ka soo qaybgashay oo ka koobnayd dhammaan beelaha wada dega Somaliland, waxa ay ku joogeen nabad iyo caano. Inta aan xasuusnay ma ay jirin cid wax lagu yeelay Burco. Inkastoo jawigaasi muddo yar ka dib is bedelay.
Maanta waxa laga joogaa labaatan sannadood. Ilaa maanta wax laga qoray arrimahaas iyo qaar kaloo badan ba ma jirto. Yaa lagu hallaynayaa? in wax qaldan la qoro qofna ma jecla. Haddii se aan wax ba maanta laga qorin, waxa berri laga qori doonaa wax kale. Xasuustuna waa ay kooban tahay. Maanta intaa aan qorayo, haddii aan qori lahaa 1992kii ama 95kii wax badan baan xasuusan lahaa oo muhiim ahaa—maantase ma xasuusni. Waar aan dabaqabanno taariikhahaas. Ugu danbayn waxa aan codsanayaa in la ii soo gudbiyo mujaahidkii u shahiiday nabadda ee lagu dilay Berbera, magaciisa iyo taariikhdiisa oo kooban.
Sayid-Axmed M. Yuusuf
Xuskii 27 May oo London lagu qabtay iyo koofiyadii Mujaahid Ibrahim koodbuur oo lasoo bandhigay.(Daawo Sawiro)
Kulankii mujaahidiintii SNM ee magaalada London
Xalay waxa lagu qabtay galbeedka London xaflad aad u qiimo badan oo
lagu xusaayey 27 May oo ay soo abaabuleen shacabweynaha reer
Somaliland ee dalkan Ingiriiska degan,xafladaas oo ay kasoo qaybgaleen
dhamaan mujaahidiintii SNM ee dalkan Ingiriiska joogay ookasoo
kicitimay daafaha dalkan Ingiriiska,
Xafladaas oo ahayd mid si wanagsan losoo abaabulay ayna soo buux
dhaafiyeen dadweyne farabadan waxa mujaahidiintii kasoo qaybgashay ka
mid ahaa Mujahid Axmed Mire,Mujaahid Cabdilahi Dhagaweyne,Mujaahid
Dolaal,Mujaahid Abdisalaam Turki iy mujaahidiin kale oo farabadan.
Dhamaan Mujaahidiintii ka hadlay oo dhamaantood madasha ka soo
jeediyey hadalo aad u muhiimo badan kuna saabsanaa xoreyntii dalka
iyo marxaladihii ay soo martay xoreyntii dalku iyo dagaaladii ay kula
jireen dawladii Siyaad Bare.
Waxa kale oo madasha hees qiiro xanbaarsan oo ku saabsan xoreyntii
dalka dadkiina markaliya ay u wada kaceen iyaga oo aan is ogeyn kana
ahayd wax ku noqotay fajiciso iyo qiiro heesay Fanaan,Caydaruus Cali
Xasan (Halyey).waxa kale oo salaan sharafeed siiyey nin dhalinyaro ah
oo ku labisan dharka militarigu xidhaan
“Mujaahid Cabdisalaam Turki waxa lagu xasuustaa hawl-galkii BIRJEEX ee
lagu soo furtay Mujaahid Cabdilaahi Askar,waxa uuna ahaa taliyihii
ciidanka hogaaminaayey,Mujaahid Cabdisalaam Turkiwaxa uu madasha
shirka ee uu xalay joogay inkastoo aanu hadalo badan kasoo jeedin waxa
aya u badnayd in dalka Somaliland horumarkiisa laga shaqeeyo layskuna
duubnaado.Mujaahid Cabdisalaam Turki waxa uu madasha kusoo bandhigay
koofiyadii Mujaahid Ibraahim Koodbuur oo dhamaan dadku ay isku
“Mujaahid Axmed Mire waxa uu isna warbixin dheer kaga sheekeeyey
halkankii ay soo galeen iyo isbedelo farabadan oo soo maray maamulkii
SNM iyo weliba talaayin uu usoo jeediyey shacabweynaha reer Somaliland
iyo iskuduubnaan la muujiyo.sidaasoo kale Axmed mire waxa uu sheegay
in uu ahaa taliyihii ciidamadii SNM ee Burco soo galay
hogaaminaayeym,oo markii ay xabadu madaxa kaga dhacdey uuna dareemin
dhaawaca in mudo ah siyaabo uu ku macneeyey daal farabadan oo
jidhkiisa ku habsadey,oo markii u udhaawacmay uu dareemay naxariis
xaga rabaani ah”.
“Mujaahid Ibrahim dhagaweyne waxa uu isna dhinaciisa warbixin kaga
sheekeeyey aad u qiimo badan oo ay dadku u riyaaqeen dhamaan ay aad
“Mujaahid Dolaal waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii madasha ka hadlay
una soo jeediyey mahadnaq dadkii xafladan quruxda badan soo abaabulay
,dhinaciisana arimaha halkankii kusoo qaatay in uu isagu qaabilsanaa
jidgoynta wadad dheer oo isku xidha Koonfur iyo Waqooyi si looga jara
cadowga taakuleynta ay isu dirayaa”.
Markii danbe waxa ururka qiimayna qaranka Somaliland ah shahaado
gudoonsiiyeen labada Mujaahid ee Axmed Mire iyo Ibraahim Cabdilaahi
Dhagaweyne iyo qarka mid ah Saxaafada Somaliland.
Xaqiiqadii shirkii xuska 27 May waxa uu ahaa habeen taariikhi ah oo
dhamaan shacabkii kasoo qaybgalay ay aad u murugeysnayeen markii
mujaahidiintu ay ka sheekeynayeen halkankii iyo dhibaatadii soo martay
oo aad arkayso dad ilmaynaaya ama oohin ay indhahooda ka muuqatey.
Mujaahidintii madasha joogtay waxa ka mid ahaa.
Axmed Mire Maxemed, Ibrahim Abdilahi (Dhagaweyne), Jamac Maxamed
(Dolaal) Cabdisalaam Turki, Maxamed Haybe, Maxamed Xiis Bacaluul,
Maxamuud Xuseen ileeye, Axmed Xirsi Qatale, Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi
( Indhoole) Abdilaahi Cabdi Muuse (Bakayle), Dr Cabdirahmaan Xirsi
Maxamed (Heeliyo), Amiin Suudi Nuur, Siciid Gahayr, Maxamuud Maxamed
(Salaxan), Cabdi Ibraahim Maxamed,
Fadlan Video kusaabsan xafladaa lasocda Insha Allah dhawaan.
ka soo xigtat:Gabileynews
Daawo Daawo France24TV: Report on ‘Somaliland’s 20th Anniversary of Independence’ 18 May
28 May, 2011 — somaliland1991
Daawo Daawo video Hargeysa 18 Maj 2011
Daawo Daawo banaan bixii London ee 18 maj 2011
18 Maj 2010 ee, magaalada Malmö, ee Sweden